Bayaanka warbaahinta oo meesha ka saaraya warar xan ah oo ku saabsan dhacdadii Dugsiga Dhexe ee Plymouth | maqaalka
Qoysaska iyo shaqaalaha Dugsiyada Aagga Robbinsdale,
Bayaanka soo socda ayaa lala wadaagi doonaa warbaahinta si loogu dadaalo in meesha looga saaro wararka xanta ah. Waxaan rabnay inaan hubinno inaad adigana aad heshay macluumaadkan.
Macluumaad dheeri ah ayaa lala wadaagi doonaa qoysaska Dugsiga Dhexe ee Plymouth berri wixii ku saabsan qorshooyinka ku noqoshada shaqsi ahaan wax barashada Khamiista.
Bayaanka Dugsiyada Deegaanka Robbinsdale ee warbaahinta
Maalintii Isniinta, Abriil 26, arday ayaa qoryo la soo raray keenay Dugsiga Dhexe ee Plymouth wuxuuna ku sii daayay dhowr xabadood xagga sare ee wadiiqada wax yar ka hor saacaddii ugu horreysay ee fasallada la bilaabay. Nasiib wanaag, qofna kuma dhaawacmin, in kastoo tiro dad ah ay goobjoog ka ahaayeen dhacdada.
Kim Royston, oo ah Kaaliyaha Maamulaha Dugsiga Dhexe ee Plymouth, wuxuu ahaa maamulihii ugu horreeyay ee dhismaha ee yimaada aagga ay dhibaatadu ka dhacday, laakiin ma uusan dhigin hub ka dhigista ardayga.
Sida laga soo xigtay Waaxda Booliska ee Plymouth, shaqaalaha dugsiga iyo Sarkaalka Kheyraadka Dugsiga ayaa si dhakhso leh uga jawaabay dhacdada, markii ay la kulmeen ardayga, ardaygu ma hubaysnayn oo wuu u hoggaansamay.
"Shalay waxay ahayd mid kamid ah maalmihii iigu adkaa ee soo maray xirfadayda aqoonyahanimo," ayuu yidhi Mr. Royston. “Wax walba si dhaqso leh ayey ku dhaceen, oo aanan helin waqti aan kaga fikiro waxa aan sameyn lahaa. Waan arkay qoriga, waxaan faray inuu tuuro waxaanan ku orday meeshii rasaasta lagu furay. Aad ayaan ugu faraxsanahay in qofna uusan wax ku noqon. ”
Dhacdadan waxaa wali baaritaan ku haya Degmada iyo Waaxda Booliska ee Plymouth.